चल्ला र अण्डा नष्ट गरेर किलोमै १६० रुपैंयाले महंगो बनाइयो कुखुराको मासु ! सरकारको बेवास्ता - Gandak News
चल्ला र अण्डा नष्ट गरेर किलोमै १६० रुपैंयाले महंगो बनाइयो कुखुराको मासु ! सरकारको बेवास्ता
गण्डकन्यूज द्वारा १७ माघ २०७६, शुक्रबार १५:११ मा प्रकाशित
काठमाडौं । गत मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म चितवनमा चलाइएको चल्ला र अण्डा नष्ट गर्ने अभियान (चिकेन होलिडे) पछि बजारमा कुखुराको मासूको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । चल्ला उत्पादकको आन्दोलनअघि काठमाडौं उपत्यकामा कुखुराको तयारी मासुको प्रतिकिलो मूल्य २१० रुपैयाँ थियो । अहिले मूल्य बढेर प्रतिकिलो ३ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ ।
वर्षभरिमा कुखुराको मासुको सबैभन्दा बढी माग हुने महिना माघ र फागुन हो । मासु व्यवसायीहरुका अनुसार पिकनिक, बिहे र अन्य कामका लागि अत्यधिक मासुको खपत यो दुई महिनामा हुन्छ । व्यवसायीले यही सिजनको मौका छोप्न चिकेन होलिडेको रणनीति लिएका थिए ।
१० दिनसम्म चल्ला उत्पादन गर्ने अण्डा नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गरेपछि मासु व्यवसायीले त्यतिबेलै दुई पटक मूल्य बढाएका थिए । कुखुराको मासुको मूल्य बढाएर उपभोक्तामा आर्थिक भार थोपर्न चिकेन होलिडे मनाइएको भन्दै सरकारी हस्तक्षेप हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको माग थियो तर सरकारले सुनेन ।अख्तियारप्राप्त सरकारी निकाय अनुगमन र कारबाहीमा चुप बसेपछि व्यवसायीको मनपरी बजारमा देखिएको छ । व्यवसायीले जुन उद्देश्यका लागि चिकेन होलिडे मनाएका थिए अहिले त्यो पूरा भएको छ ।